abakhiqizi bezilwane abasebenza ngokudla kwezilwane,umphakeli wepelletizer ovela eChina
Amandla:15kw,isigaba esisodwa noma izigaba ezintathu
Uhlobo lwamandla:ugesi,injini yedizili
Ikhono:500~ 600kg / h
Usayizi wepellets wokugcina:2~ 8mm
Isetshenziselwa:ukwenza ukudla kwenkukhu,ukufuya izinkomo,ukudla kwengulube,utshani pellet
Ama-Raw material:okusanhlamvu,umquba,isidlo sakusihlwa,alfalfa,irayisi husk,isidlo sotshani,ubhekilanga,njll
Kudingeka umswakama wezinto ezingasebenzi:12~ 15%
Thola Uphenyo I-WhatsApp
Uhlobo lwe-Fish Pellet Mill Dry Type
Uhlobo lwe-Fish Pellet Mill Wet
Okuphakelayo Okukhulu Pellet Mill
Okuphakelayo Okuncane Pellet Mill
Umshini Wokusaphaza Okuphakelayo
Umshini Wokuxuba Okuphakelayo
Umshini wokudla owengeziwe wezilwane ezifuywayo
Eminye Imishini Yokondla Line
umshini wokudla izinhlanzi wedizili
Setha umugqa wokukhiqiza okuphakelayo kwezinkukhu ongu-1PTH
Inja ukudla izithako ukwakheka
Umugqa wokukhiqizwa omncane wokudla
Isigayo se-pellet yezinhlanzi ezintantayo eNegeria
Ukwenza ama-pellets okondla izilwane
Ungakwenza kanjani ukudla kwezilwane ezifuywayo
Inkukhu feed ama-pellets
Imfuyo yokudla okufuywayo
umshini wokupheka izinhlanzi
Isigaxa sombila sevidiyo yenkukhu yokudla
inkukhu feed pellet mill video
inqubo yokudla eyengeziwe yezinhlanzi
imishini yokukhiqiza yezinhlanzi
ividiyo yokukhiqiza ukudla kwezinhlanzi
umphakeli we-flat die pellet mill
I-feed pelletizer mill kwesinye isikhathi nayo ibizwa ngokuthi yi-pellet Press, isetshenziselwa kakhulu ukwenza ama-pellets wokudla kwezilwane kufaka phakathi ukudla kwezilwane okusuka kokudla okulungiselelwe kokudla (alfalfa, ibhali, ukolweni, malt, oats, ubhontshisi, njll.). Amamitha wokuphakela we-feed ahluka ngosayizi kanye nemiklamo, kufaka phakathi i-flat die feed pelletizer mill futhi ring die feed pellet mill. Umthamo Production of pellets ngamunye pellet mill kungaba isukela 80 kg ngehora kuya 9 amathani ngehora.Lo mshini we-pelletizer wokuphakela uyathengiswa imishini ekhetheke kunazo zonke kunogwaja, inhlanzi, inyama yenkukhu , izingulube, imvu, isitshalo sokudla kwezinkomo. umshini wokuthengisa ama-feed pelletizer unentengo engcono kakhulu ikakhulukazi yemindeni ,ipulazi elincane neliphakathi nendawo kanye nezimboni ezilula, kanye nomshini wokudla wezilwane wepelletizer oyithengiswayo uyimodeli ekhethwayo yokwenza ngcono ukusebenza kahle kwezomnotho.
izinto ezingavuthiwe zale pelletizer feed pelletizer nazo zitholakala kakhulu njengokudla kommbila,irayisi husk,isidlo sakusihlwa,isidlo sotshani ,alfalfa etc.as isilwane feed umakhi wezilwane pellet,sinikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe,intengo ephansi,kanye nenkonzo enhle,singakunika umshini wokuphaka izilwane wepelletizer ngesilinganiso sokukhiqiza sisuka kuma-30kilograms / h kuye 1500 amakhilogremu / h.long ukucatshangelwa kwamandla ahlukile,umshini wethu wokudla we-pellet ungaqhutshwa futhi ngenjini yedizili noma nge-motor motor.gesi kagesi we-pelletry feed pelletizer kungaba isigaba esisodwa noma isigaba ezintathu
Kungani Khetha Izinkukhu Zokudla Okuphakelayo kwe-CHICKEN yakho?
Le pelletizer feed pelletizer yepulazi lezinkukhu ezincane noma ukusetshenziswa kwasekhaya kwehlukile kwezinye feed ama-pellet mill. Kepha inkukhu, zigcinelwa ukukhula okusheshayo nempilo. Ukuphakelwa kwenkukhu kufanele kugcizelele okuqukethwe komsoco nezithako. Sakhe le pelletizer yezinkukhu zasekhaya eyakhiwe ekhaya futhi sagxila ekwandiseni ukuthembeka kokudla kanye nokuqina okungenza ukusheshisa kwenkukhu kube nokuningi kunokwejwayelekile. Yini enye, inkukhu ngezigaba ezahlukahlukene ezikhulayo idinga ama-pellets osayizi ahlukene, ngalo mshini, ungenza ama-feed pellets kusuka 2-10 mm, ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene.
Izici ezihlukile ze-Electric Portable Feed Pellet Mill
1. Kuqhutshwa ngemoto kagesi, Ukonga amandla amaningi .
2. I-mill die pellet mill yenziwa ngezinto ezingavuniyo ngakho-ke impilo ende yenkonzo
3. Ingcindezi eshintshayo ayithuthukisi kuphela amandla wezindaba we-roller, kepha futhi yandisa impilo yenkonzo.
4. Inqubo yokuxovula iyabonakala, ngakho-ke ungabheka inqubo yokungenisa izithako ngqo ngokubuka igumbi lokuthambisa.
5. Amamitha kagesi okudla okufakelwa ugesi angakwazi ukucubungula izinhlobo ezahlukahlukene zokusanhlamvu okuqinile kube ngamapayipi amancane wokudla wezilwane ezinjengezinkukhu, unogwaja, ingulube, njll.
I-Pelletizer Okuphakelayo Okuphakelayo Kwezinkukhu Kujabulela Ukuthandwa Okuphezulu
Eminyakeni yakamuva, ukuthuthukiswa kwe i-pelletizer ephathekayo ephathekayo kusiza impilo yomuntu kakhulu. Kuyatholakala ukuthi abalimi bangabanikazi be izinkukhu zasekhaya ezondla izinkukhu kokwenza pellets feed noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi. Kuyasiza abalimi ukuthi baphendule zonke izinhlobo zam okusanhlamvu zibe ngotshwala. Okomuntu ngamunye, le pelletizer ye-dizili yenkukhu yokudonsa ayikwazi ukukugcina kuphela isabelomali esiningi ngesisekelo sokuhlinzeka okuphakelayo okwanele, kepha futhi kusheshiswe ukukhula kwezinkukhu ngempumelelo futhi kunikeze ukondleka okuningana kwesidingo sezinkukhu. Ngakho-ke abalimi abaningi baqala ukukhetha i-pelletizer feed pelletizer yezinkukhu ezisebenzayo ukucubungula ama-pellets abo wokudla.
Izinga eliphakeme le-Pelletizer Izingxenye Eziyinhloko
Lapho umshini wokudla we-pelletizer usebenza, ama-roller kanye ne-flat die aqala ukuhlanganisa ndawonye izinto ezingavuthiwe zibe izimbobo zokufa ukwenza ama-pellets. Ukucindezelwa njalo kwesisindo esindayo kwenza ama-roller futhi afe abe izingxenye zokugqoka okusheshayo. Amakhasimende amaningi akhathazekile kakhulu ngekhwalithi yama-roller kanye ne-flat die okuyizingxenye eziphambili zomsebenzi we-pelletizer mill yethu. Ama-roller ethu nokufa okucwebezelwe kwenziwa ngensimbi ephezulu ye-alloy yokwelula impilo yokusetshenziswa. Ukwelashwa okufudumele ukuze kufe amaflethi futhi ama-rolling enza indawo yawo ingabi lula. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwe-roller yethu nokwakhiwa kwenzelwe ukuvimba ukugeleza kokuqukethwe futhi kunikeze indawo ebushelelezi yokuphuma okungcono. Siphinde futhi sinikeze ama-roller we-premium futhi kufefa ngosayizi abahlukahlukene bezimbobo okhethayo.
Ipharamitha Yobuchwepheshe Bokuphakelwa Kwezinkukhu
(kg / h) Ijubane
(r / imizuzu) Ubukhulu
I-VTKLP125 3 50~ 80 320 0.66*0.32*0.68
4 100~ 150 320 0.78*0.32*0.75 120
I-VTKLP210 7.5 200~ 400 320 0.97*0.43*0.95
11 300~ 500 320 1.15*0.48*1.05 280
I-VTKLP260 15 500~ 600 380 1.25*0.52*1.1
I-VTKLP360 22 700~ 800 380 1.45*0.6*1.42
Ividiyo yenkukhu yokudla kwepelletizer
khetha ulimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीItaliano日本語한국어PortuguêsРусскийEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu
Ikheli：Indawo yeZimboni yeXingyang,Idolobha laseZhengzhou,Isifundazwe saseHenan,China
I-copyright © 2012-2021 UVictor Pellet Machine. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Skena ikhodi ye-QR ye-wechat